Mandalay Guide 42
What's New 1207
COVID-19 Updated 37
Event & Entertainment 47
Mandalay Trend 81
Shopping & Promo 16
by Aung Myo Hein on 21 November, 2020
ဝန်ဆောင်ခ (၁၀၀) ထဲနဲ့ ဘယ်လို လွယ်လွယ်ကူကူ မီတာဆောင်ကြမလဲ?
အခုလို ရောဂါတွေပြန့်နှံ့နေတဲ့ အချိန်မှာ မီတာဆောင်ရင် လူတန်းစီရ၊အကြွေဆောင်သွားရနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေရပြီလား?? Read full article
Covid ကာလမှာ လူကြီး၊ လူငယ်အားလုံးက အိမ်မှာပဲ နေကြရတဲ့ အတွက် ကိုယ့်ကို အပျင်းပြေစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို အလျှိုလျှို ရှာဖွေလျက် ရှိကြပါတယ်။ Read full article
အခုခေတ်လူငယ်တွေကြားထဲ ညအိပ်မပျော်တာဟာ လူငယ်တော်တော်များများ ကြုံလေ့ရှိတဲ့ အရာတစ်ခုလို ဖြစ်လာပါတယ်။ ညဘက် မအိပ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုး ရှိကြမှာပါ။ Read full article
နိုင်ငံတကာ လုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းမှ ပြောကြားထားချက်အရ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ယခုနှစ် (၂၀၂၀) ခုနှစ်၏ ဒုတိယနှစ်ဝက် ကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့အလုပ်ချိန် (၁၇) ရာခိုင်နှုန်းကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Read full article
Lock Down ကာလ ဖြေလျှော့ပြီးတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဆယ်တန်းအမှတ် စစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ အောင်စာရင်းတွေကို ကြေညာဖို့ ပြန်လည်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး အောင်စာရင်း ရလဒ်များကိုတော့ ဒီကနေ့ (၉.၈.၂၀၂၀)၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် မနက် (၁၂း၃၀) နာရီအတိမှာ စတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတ Read full article
မန္တ​လေး​ကိုရောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အခါ လူသိများထင်ရှားပြီးသား​နေရာ​တွေထက် ​ရှေး​ဟောင်းတန်ဖိုးလည်းရှိ၊ လူလည်းသိပ်မသ Read full article
ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ ဝန်ထမ်းများအတွက် ထိုဝန်ထမ်းများနဲ့ အလုပ်ရှင် သဘောတူညီချက်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေး အခါကြီးရက်ကြီးများကို လစာမရှိ အလုပ်ပိတ်ရက်အဖြစ် ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။ Read full article
ဩဂုတ် (၇) ရက်နေ့ မန္တလေး နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း၊ စက်သုံးဆီဈေးနှင့် ရွှေဈေးများ
&nbsp; ဩဂုတ်&nbsp; (၇) ရက်နေ့ မန္တလေးနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း၊ စက်သုံးဆီဈေးနှင့် ရွှေဈေးများ ဩဂုတ် (၇) ရက်နေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကို Central Bank Myanmar / စက်သုံးဆီဈေးများကို Denko ဆီဆိုင်/ ရွှေဈေးများကို အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်တို့မှ အောက... Read full article
မြန်မာကျပ်ငွေ ၄၁၂ ဘီလီယံထိ တိုးတက်ခဲ့သော SCG ၏ ဝင်ငွေ
&nbsp; &nbsp; SCG ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးခုမှာ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး အမြတ်မှာ မြန်မာကျပ်ငွေ ၄၁၂ ဘီလီယံကျပ် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၉၄ သန်း) သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နှစ်ကထက် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့် တိုးတက်ခဲ့ကြောင်း Siam Cement Group (SCG) မှ သတင်းထုတ်ပြန်ထာ... Read full article
ဩဂုတ် (၆) ရက်နေ့ မန္တလေး နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း၊ စက်သုံးဆီဈေးနှင့် ရွှေဈေးများ
ဩဂုတ် (၆) ရက်နေ့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းကို Central Bank Myanmar / စက်သုံးဆီဈေးများကို Denko ဆီဆိုင်/ ရွှေဈေးများကို Read full article
&nbsp; By WMMH (Mizzy) ၂၁ရာစုမှာ အင်္ဂလိပ်စာဟာလည်း အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှာ ပါဝင်လာပါတယ်။ မိမိက အလုပ်မအားလပ်လို့ပဲဖြစ်စေ၊ လေ့လာတဲ့နေရာမှာ အားနည်းနေတာဖြစ်စေ၊ ... Read full article
နည်းပညာမဖွံ့ဖြိုးစဉ်ကတည်းက Online Music Store တွေမှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ ကျော်ဟိန်းရဲ့ သီချင်းများ
&nbsp; By WMMH (Mizzy) အကယ်ဒမီ (၅) ဆုရှင် သရုပ်ဆောင်နဲ့ တေးသံရှင် မင်းသားကြီးကျော်ဟိန်းဟာ သရုပ်ဆောင်အပိုင်းမှာသာမက တေးဆိုပိုင်းမှာပါ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။&nbsp;&nbsp; ... Read full article